Semalt बाट डाटा निकासीको लागि E कुशल उपकरणहरू
वेब पृष्ठहरूबाट टेक्स्ट स्क्र्याप गर्नको लागि त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् तर केही सामान्यहरू ग्राहक डेटा स collection्ग्रह, मूल्य निर्धारण विश्लेषण, वेबसाइट ओवरहाल, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, र ईमेल ठेगानाहरूको संग्रहको लागि हुन्। दुर्भाग्यवस, तपाईं यसलाई म्यानुअल्ली बाहिर लैजान सक्नुहुन्न जब तपाईं दैनिक आधारमा सयौं वेब पृष्ठहरूबाट डाटा निकाल्न आवश्यक पर्दछ। यसैले धेरै वेब डेटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरू विकास गरिएका छन्। यहाँ तिनीहरू मध्ये7छन्:
१. आइकोनिको HTML पाठ एक्सट्रक्टर
संगठनहरूले नियमित रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूबाट टेक्सा टेक्ने क्रममा उनीहरूले उनीहरूको साइटहरू भर्नबाट रोक्न सचेत प्रयास गर्छन्। तिनीहरूको साइटहरूको स्क्र्यापिंग रोक्नको लागि उनीहरूले लिने केहि चरणहरू उनीहरूको साइटमा दायाँ क्लिक समारोह अक्षम गर्दैछन ताकि तपाईं प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सक्नुहुन्न। केहि अन्य संगठनहरू दृश्य दृश्य समारोह अक्षम गर्दछ जबकि केहि पृष्ठहरू पूर्ण रूपमा लक गर्दछ।
यो त्यहि हो जहाँ Iconico एक्स्ट्रक्टर आउँछ। माथि उल्लेखित कुनै पनि टेक्निकल बाधाले यस उपकरणलाई कुनै पनि वेबसाइटबाट HTML पाठ प्रतिलिपि गर्नबाट रोक्न सक्दैन। यो केवल कुशल मात्र छैन, तर प्रयोग-गर्न-सजिलो पनि हो। तपाईंले केवल आवश्यक पाठ हाइलाइट गर्न र प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छ।
यस उपकरणसँग धेरै स्वचालित प्रकार्यहरू छन् र ती मध्ये एउटा वेब स्क्र्यापि forको लागि हो। UiPath सँग स्क्रिन स्क्र्याप गर्ने प्रकार्य पनि छ। यी सुविधाहरूको साथ, तपाईं तालिका डाटा, छविहरू, पाठ, र कुनै पनि वेब पृष्ठबाट डाटा प्रकारको अन्य प्रकार स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ।
यस उपकरणले छविहरू, फाइलहरू, पाठ स्क्र्याप गर्न सक्दछ, र यसले PDF फाईलहरूबाट डाटा स्क्र्याप पनि गर्न सक्दछ। थप रूपमा, यसले JSON, CSV फाईलहरू, वा XML फाइलहरूमा स्क्र्याप गरिएको डाटा निर्यात गर्न सक्दछ।
HTML. HTML लाई पाठ
यसको नामले सlies्केत गर्दछ, यसले वेब पृष्ठहरूको HTML स्रोत कोडबाट पाठ निकाल्छ। तपाईंले केवल पृष्ठ स्क्रिन गर्न चाहानु भएको यूआरएल प्रदान गर्न आवश्यक छ।
के यस उपकरणलाई छुट्याउँछ यसको पोइन्ट र क्लिक प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस हो। इन्टरफेसले कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञान बिना नै प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ। अक्टोपार्सको अर्को सुविधा गतिशील वेब पृष्ठहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्ने क्षमता हो। यसमा दुबै नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको संस्करणहरू छ त्यसैले तपाईं यसको अनुभव पाउन निःशुल्क संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो निःशुल्क र खुला स्रोत उपकरण हो। यस उपकरणको साथ केवल समस्या यो हो कि यसमा केही प्रोग्रामिंग ज्ञानको आवश्यक पर्दछ। यद्यपि यसको कार्यक्षमता ठूलो ट्रेडअफ अफ हो। यदि तपाईं केहि प्रोग्रामि learn् सिक्नको लागि समय लिन सक्नुहुनेछ भने, तपाईंले उपकरणको आनन्द लिनुहुनेछ जुन प्रमुख ब्रान्डले प्रयोग गर्दैछ। यो खुला स्रोत उपकरण भएको कारणले यसमा प्रयोगकर्ताहरूका समुदायहरू छन् जुन तपाईंलाई कुनै चुनौतीमा खेल्दा तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
यो नि: शुल्क उपकरण पनि हो जुन वेब पृष्ठहरूबाट अनास्ट्रक्टेड सामग्री स्क्र्याप गर्न र यसलाई संरचित ढाँचामा निर्यात गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो आवधिक रूपमा केहि निर्दिष्ट वेब पृष्ठहरुबाट डाटा भेला गर्न को लागी अनुसूचित गर्न सकिन्छ। किमोनोले तपाईको कार्यप्रवाहको लागि एक एपीआई सिर्जना गर्दछ त्यसैले तपाईले प्रत्येक चोटि प्रयोग गर्न चाहानु भएको प wheel्गललाई पुनर्स्थापित गर्नु आवश्यक पर्दैन।
निष्कर्षमा, तपाईले स्क्र्याप गर्नु पर्ने प्रकारको डेटाले फरक पार्दैन, यी उपकरणहरू मध्ये एक सहयोगी हुन सक्छ। केवल तिनीहरूलाई कोसिस गर्नुहोस् र एउटा चयन गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि उत्तम काम गर्दछ।